Pyidaungsu Font Download ယူရန် – Myanmar Unicode® Migration
Pyidaungsu Font Download ယူရန်
Pyidaungsu Font နှင့် Keyboard တပါတည်းပါဝင်ပါတယ်။ အထောက်အပံ့ပြုထားသော ဘာသာများမှာ- ဗမာ, သက္ကတ/ပါဠိ, မွန်, ရှမ်း, စကောကရင်, ပိုးကရင်(အနောက်ပိုင်း), ပိုးကရင် (အရှေ့ပိုင်း), ပအိုဝ့်ကရင်, ကယား, အရှိုချင်း, ခန္တီးရှမ်း, Aiton & Phake, တိုင်းလျမ်ခေါ်ရှမ်းနီ, ရွှေပလောင်, ပလေးပလောင်, ရူမာည်းတအောင်း, စသည်တို့ဖြစ်သည်။
(ဖောင့်နှင့်ကီးဘုတ်ပါဝင်သော All-in-One Installer ဖြစ်ပါတယ်)
အသုံးပြုလျှက်ရှိသော Windows OS နှင့် Office Version ကိုရွေးချယ်ပါက Font Download Links ကျလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
1. Pyidaungsu-1.8.3_Regular.ttf ဖောင့်
2. Pyidaungsu-1.8.3_Bold.ttf ဖောင့်
3. Pyidaungsu-1.8.3_Numbers.ttf ဖောင့်
1. Pyidaungsu-2.5.3_Regular.ttf ဖောင့်
2. Pyidaungsu-2.5.3_Bold.ttf ဖောင့်
3. Pyidaungsu-2.5.3_Numbers.ttf ဖောင့်
4. Myanmar3-2018.ttf ဖောင့်
ရွေးချယ်ရမည့် Version များကိုမသိရှိပါက Installer Setup File ကိုရယူနိုင်ပါသည်။
1. Pyidaungsu-Book-1.8.2_Regular.ttf ဖောင့်
2. Pyidaungsu-Book-1.8.2_Bold.ttf ဖောင့်
iPhone, iPad အတွက် ဖောင့်ပရိုဖိုင်
2. Pyidaungsu-1.3.mobileconfig (iOS 9နှင့်အောက်)
iPhone, iPad Safari Browser ကိုသုံး၍ ဒေါင်းပါ